Dagaalo ka dhacay Gobolka Sh/Hoose oo la sheegay in lagu dilay Ciidamo katirsan AMISOM.
Saraakiil u hadashay Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in xalay dagaal culus ku qaadeen Fariisimo Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ku leeyihiin Degmooyinka Janaale iyo Owdhiigle ee Gobolka Sh/Hoose.
Shabaab Saraakiishooda ayaa ku waramay in dagaal dhoor jiho ah ay ku qaadeen Fariisimada Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ku lahaayeen degmooyinka ay weerarka ku qaadeen halkaasna qasaarooyin lixaad leh ku gaarsiiyeen Ciidamada ay weerareen.
Sargaal u hadal Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegay in tiro kabadan 8-Askari oo isugu jira Soomaali iyo AMISOM ku dileen Weerarka xalay ay ku qaadeen Fariisimaha Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada ku lahaayeen Degmooyinka Janaale iyo Owdhiigle
Al-Shabaab dhankooda kama aysan hadlin Qasaaraha kasoo gaaray Dagaalada ay sheegeen in ay la galeen Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM , Mana jiro dhinaca Dowlada iyo AMISOM war kasoo baxay oo ku aadan dagaalada ay Shabaab sheegeen in ay ku qaadeen Fariisimahooda.
Tahriibayaal Ku Geeriyooday Daadad Ay Dhaliyeen Roobab Ka Da’ay Dalka Yemen.
Laba qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyootay daadad ay dhaliyeen roobab ka da’ay wadanka Yeman xilli tahriib ay ku galayeen caasimadda dalakasi.
Wararka aynu ka heleyno dalka Yenen ayaa sheegaya in Laba qofood oo Soomaali ah ay geeriyoodeen xilli ay tahriib ku marayeen dhul buuraley ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi.
Labada qofood ee dhimatay ayaa la sheegay iney la tageen daadad xowli ku socda xilli ay doonayeen iney ka tallaabaan waadi, sidaana ay ku nafwaayeen markii ay la tageen biyihii soo rogmaday.
Kumanaan tahriibayaal Soomaali ah ayaa ku qarqamay badda u dhaxeysa Yemen iyo Soomaaliya. kuwaas oo naftooda ku biimeeyay una bareeray halistaasi si ay u helaan nolol dhaanta tan ay dalkooda uga soo carareen.
Madaxweyne Xasan Sheekh Iyo Wafdi Uu Hogaaminayo Oo Ku Sii Wajahan Magaalada Roma.
Qabanqaabo xoog leh oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa saaka ka socota magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga, taasoo ay wadaan madaxda Safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Wadankaasi.
Madaxweynaha Jamuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xaan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa in barqanimada maanta ay gaaraan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, waxaana halkaasi ka socota qabanqaabada loogu jiro soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la rajeynayaa in uu wadahadal la qaato madaxda dalka Talyaaniga, isagoo iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi.
Shariif Xasan iyo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka oo ku wajahan Baydhabo iyo Xog ku aadan ujeedka socdaalkooda.
Warar lagu kalsoonyahay oo la helayo ayaa sheegaya in Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi xildhibaano ah in ay ku wajahanyihiin Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay maalmaha soo aadan.
Ujeedka Shariif Xasan iyo Xubnaha lasocda ayaa la sheegay in ay tahay mid ay ku doonayaan in ay ku dajiyaan Shacabka Gobolada Baay iyo Bakool sidoo kale Baydhabo ka bilaabaan qorsho Maamul Goboleed loogu dhisayo sadaxda Gobol ee kala ah Baay , Bakool iyo Sh/Hoose.
Shacabka ku dhaqan Gobolada Baay iyo Bakool ayaa Mucaaradad lasoo baxay tan iyo markii Magaalada Adis ababa Heshiis kuwada gaareen Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Jubba uu Hpgaamiyo Sheekh Axmed Madoobe.
Shariif xasan oo ah Nin aan Siyaasadiisa aan la fahmi Karin ayaa mudooyinkii dambe ku howlanaa maamul goboleed loo dhiso Sadaxda Gobolka ee Baay , Bakool iyo Sh/Hoose in kastoo qorshihiisa waayihii hore uu culees kala kulmayay dhinaca Dowlada oo iyadu kasoo horjeeday maamulkaasi.
Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka ayaa hada dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho si uu uga faa’iideesto qilaafka ka dhax taagan Odayaasha Dhaqanka Gobolada Baay iyo Bakool iyo Dowlada uuna ka dhaadhiciyo odayaasha iyo dadka ku dhaqan Gobolada Baay iyo Bakool in ay dhistaan Maamul Goboleed uu isagu hor boodayo lana mid ah maamulka Jubba uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe.
Dibad baxyo shalay iyo marar sii horeesay ka dhacay Magaalada Byadhabo ayaa la sheegay in lacag fara badan abaabulkeeda uu ku bixiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan si uu iskaga horkeeno Dowlada Federaalka iyo Shacabka ku dhaqan Gobolada Baay iyo Bakool.
Shalay ayey aheed markii Odayaadha Dhaqanka Gobolada Baay iyo Bakool ay ku amreen Xubnaha Dowlada ugu jiro in labo maalin gudahood ay Baydhabo ku yimaadaan hadii ay kafiirsan doonaan in ay Dowlada uga sii mid ahaadaan.
Wararkii Ugu Dambeeyay Shirka looga hadlayo Arimaha Soomaaliya ee ka furmay Brussels(Daawo Sawirada)
Shirweynihii qorshaha New Deal ayaa maanta si rasmi ah uga furmay Brussels magaalada madaxda dalka Belgium isla markaana ah xarunta Midowga Yurub “Europian Union”. Shirkan oo ay wada gudoominayeen Madaxweynaha Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweyne ku xigeenka MY, ahna wakiilka guud isla markaana u qaabilsan arrimaha dibadda Catherine Ashton.
Madaxweynaha MY Herman Van Rompuy iyo madaxweynha DFS Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furitaankii shirka ka soo jeediyay khodbado kooban oo ku wajahan qorshaha New Dealka iyo sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa dib-u soo kabashada dalka iyo ku tilaabsiha horumar taabo gal ah.
Mudane Herman ayaa khodbadisii furitaanka ku cadeeyay in MY had iyo jeer garab taagan yahiin dalka Soomaaliya. Waxaana uu shirka maanta ku tilmaamay mid taariikhi ah oo markhaati u ah sida caalamku u garab taagan yahay Soomaaliya. Waxaana uu khodbadiisa si qoto dheer ugaga hadlay qorshahan cusub ee New Deal iyo sida caalamku ugu taagan yahay in Soomaaliya uu gacan uga siiyo dib-u dhiska iyo horumarka ay hiigsanayso.
“Waa maalin taariikhi ah, markhaatina u ah sida Midowga Yurub iyo caalamka intiisa kalaba u garab taagan yihiin Soomaaliya. Waxaa cad inaan dhamaanteen aqbalsan nahay masuuliyada guud ee inaga saaran ka qeyb qaadashada xal u helida caqabadaha haysta Soomaaliya,” ayuu yiri Herman Van Rompuy, Madaxeynaha Midowga Yurub, oo si weyn uga mahadceliyay horumarka DFS ay ku tilaabsatay mudadii yareyd ee ay jirtay.
Madaxweynaha DFS ayaa khodbadiisii horudhaca ahayd faah-faahin buuxda uga bixiyay tilaabooyinka dhanka xalka iyo horumarka loo qaaday asagoo dhanka kalana xusay caqabadaha jira iyo baahida ay Soomaaliya u qabto taageerda caalamka si looga gudbo marxalada adag ee dalku mudada dheer ku soo jiray. Waxaana uu caalamka ugu baaqay in wax laga badalo qaabkii hore ee arrinta Soomaaliya loo wajihi jiray.
“Waxaan ku tilaabsanay horumar la taaban karo waxaana hiigsanaynaa Soomaaliya nabdoon oo horumar ku wajahan. Waa ay jiraan dhinacyo aan wali ka liidano, waxaanse caalamka u xaqiijinaynaa inaan ku dadaalayno hirgalinta dawlad wanaaga iyo sidaan wadanka ku xasilin lahay,” ayuu yiri madaxweynaha DFS mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khodbo dhinacyo badan taabanaysa ku gabo-gabeeyay in guusha ugu weyn ee qorshan New Deal laga gaaro ay noqoto dhismaha Soomaaliyada cusub.
Ururka Xisbul Islaam uu Hogaamin jiray Xasan Daahir oo Maanta Shir uga furmay Muqdisho.
Sida uu xaqiijiyay Xoghayaha arimaha Dibada Ururka Xisbul Islaam Maxamed Macalin oo goordhaw shir jaraa'id qabtay waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ka furmay Shir ay iskugu imaanayaan xubnaha katirsan Ururkii Bur buray uu Hogaamin jiray Sheekh Xasan Daahir Aweys ee Xusbul islaam balse dhawaan dib loo soo nooleeyay Ururkaasi
Maxamed Macalin ayaa xusay Shirka maanta uga furmay Magaalada Muqdisho ay diirada ku saarayaan marxaladaha kala duwan uu hada dalka ku jiro iyo sidoo kale arinta Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsi ugu jira Dowlada Soomaaliya iyo sidii Sheekha Xabsiga looga soo saari lahaa.
Xoghayaha arimaha Dibada Ururka Xisbul Islaam Maxamed Macalin ayaa ku baaqay in wax walbo wada hadal lagu dhameeyo lagana tago ficilada dagaalka xumbaarsan uu sheegay in ay yihiin kuwo aan wax faa’iido ah marnaba keeneyn.
Shirka Maanta u furmaya Ururka Xisbul Islaam ayaa sidoo kale la sheegay in looga arinsan doono sidii isbadal loogu sameyn lahaa Hogaanka Ururkaasi oo hada dib boorka looga jafayo lana doonayo in uu noqdo Urur aan Hubeesneen.
Lama oga Xubnaha Kulanka maanta ay yeelanaan Ururka Xisbul Islaam ka qeyb gali doona , waxaana Xusid mudan in Hogaamiyihii Ururkaasi ahaana ninkii aas aasay Sheekh Xasan Daahir Aweys uu ku xiran yahay Xarunta Hay’ada Nabad Sugida ku leedahay Muqdisho kadib markii uu kasoo baxsaday Ururka Al-Shabaab uu ku biiray.
War Deg Deg Ah Dibad bax balaaran oo looga soo horjeedo Shirka Maanta ka furmay Brusless oo goordhaw Bilowday.
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in halkaasi goordhaw uu ka bilowday dibad bax balaaran oo looga soo horjeedo Shirka maanta ka furmaya Magaalada Bressuls ee looga hadlayo arimaha Soomaaliya.
Dibad baxayasaha oo wata boorar ay kaga soo horjeedaan Shirka Maanta la qabanayo waxa ayna muujiyeen dareen ay kaga soo horjeedaan Shirkaasi Arimaha Soomaaliya iyo sidoo loo taageeri lahaa Dowlada looga hadlayo.
Dibad baxayaasha ayaa sidoo kale kasoo horjeeda Maamulka Jubba uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo kamid ah maamulada ka qeyb galaya Shirka maanta ka furmaya Magaalada Bressuls.
Dibad baxa ayaa la filayaa in ay ka hadlaan Odayaasha Gobolada Baay iyo Bakool iyo Xubno siyaasiyiin ah si ay u muujiyaan sida ay iga soo horjeedaan Shirka maanta ka furmaya Bressuls iyo Maamulka Jubba uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe dhawaan heshiis la galay Dowlada Soomaaliya.
Saraakiisha Al-Shabaab oo ka yaraatay Cabsidii iyo qal qalkii ay wajihi jireen ,Xiligana si caadi ah u nool (Warbixin)
Deegaanada ay gacanta ku hayaan Xarakada Al-Shabaab mudooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka jiray cabsi iyo wal wal ay qabeen saraakiisha iyo dagaalyahanada katirsan Al-Shabaab kuwaa oo ka cabsan jirin in duulaano lagu soo qaado ama duqeymo loo geesto.
Xaalada ayaa hada sidaasi ka badalan saraakiisha Al-Shabaab ayaan si caadi ah aan cabsi laheyn waxa ay ugu noolyihiin Degmooyinka iyo deegaanada kale ay gacanta ku hayaan iyadoona la tilmaamayo in ciidamadii difaaca adkaa ku jiray naftooda ay is dhigteen.
Arimahan ayaana loo sababeeyay Dowlada Soomaaliya iyo Dowladihii kale ee ku taageeri jiray la dagaalanka AL-Shabaab oo ka mashquulay qabashada goobaha wali AL-Shabaab ka taliyaan sida Magalaooyinka Baraawe iyo Buulo Burte.
Dowlada uu Hogaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh ayaan iyadu wax hor mar dhinaca dagaalka ah aan ka gaarin Xarakada Al-Shabaab iyadoona lawada ogyahay goobaha ay Dowlada hada gacanta ku heyso ay yihiin inta badan goobihii Shabaab laga saaray intii ay jirtay Dowladii Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Hogaamiyaal badan oo katirsan Al-Shabaab oo madaxooda la dhigay Malaayiin Dollar ayaa hada cabsi badan aysan dareemeyn iyadoona ay yaraadeyn Diyaaradihii lagu arki jiray Hawada Magaalooyinka ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Xasiloonida iyo dagnaanta ay heleen Al-Shabaab ayaa keentay in iyagu dhaxdooda isku mashquulaan iskana dilaan Hogaamiyaal sare oo laf dhabar u ahaa Dagaalada ay kooxdaasi kawado Koonfurta Soomaaliya.
Mid kamid ah Dowladaha Yurub oo si xoog ah Muqdisho ugu soocelineysa Somali magangelya-doon ah.
Dowladda Holland ayaa sii wada olole si qasab ah dalkooda loogu celinayo magangelya-doon Soomaali ah, waxaana tillaabadaasi cambaareeyey Jaaliyadda Soomaalida oo ku tilmaamay in Holland ay ku xadgudbeyso sharciga dalalka Midowga Yurub ee ilaalinta xuquuqda qaxootiga ah.
Mahdi Ibrahim Geeddi oo ka mid ah magangelya-doonkaas ayaa maanta oo ah 16/09/2013 si qasab ah looga soo duulin doonaa garoonka dayuuradaha Schipol, waxaana uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho, waxaana taasi ay walaac ku abuurtay Soomaalida kale ee billaa sharciga ah, iyadoo arrinta dib u celinta qaxootiga ay gacan weyn ka geysanayaan qaar ka mid ah ururada & shaqsiyaad Soomaali ah.
Waaxda socdaalka Soomaaliya ayaa horay dib ugu soo celisay Holland 2 dhalinyaro ah oo si qasab ah loogu soo celiyey Muqdisho kadib markii codsigoodii magangelya-doonka ahaa la laalay, waxaana ay dad badani iminka isweydiinayaan tillaabada ay ku dhaqaaqi doonaan maalmaha soo socda marka Muqdisho laga dejiyo Mahdi Ibraahim Geeddi.
Axmed Aadan Weheliye oo ka mid ah dadka billaa sharciga ah ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay goáan cad ka qaadato arrinta dib u celinta qaxootiga ah, ayna kala doorato in ay damaanad-qaad dhinaca ammaanka ah siiso muwaadiniinta la soo celiyo, una abuurto shaqooyin ama in ay ku wargeliso wasaaradda arrimaha dibedda Holland in ay arrintaasi joojiyaan inta ammaanka si buuxda gacanta loogu dhigayo.
Jen. Galaal oo ka hadlay sida loo xaqiijin karo amaanka Muqdisho kana hadlay sababaha amaan darada keenaya.
Jeneraal Max’ed Nuur Galaal oo kamid ahaa saraakiishii hore ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay amaan darada mudooyinkii dambe kusoo korortay Magaalada Muqdisho iyo sababaha keenay amaan daradaasi.
Jeneraalka ayaa u xusay in Dowlada Federaalka Soomaaliya gaar ahaan saraakiisha dhinaca amaanka u qaabilsan ay ku fashilmeen xasilinta amaanka Magaalada Muqdisho , waxa uuna intaa raaciyay in Hay’ada amaankii Howlihii looga baahnaa ay hareer mareen.
Waxa kale uu sheegay Galaal in Gudigii amaanka dhawaan uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya aysan u muuqan kuwa la tashiyo la sameenaya saraakiishii hore ee amaanka oo qibrad badan u leh howlaha amaanka iyo Xasilinta Dalka.
Jeneraal Max’ed Nuur Galaal ayaa sheegay in Masuuliyiinta Dowlada u qaabilsan dhinaca amaanka dalka aysan aqoon u laheyn howlaha amaan ee laga sugayo waxa uuna ku taliyay hadii la doonayo in amaanka hagaago in wada tashiyo lala sameeyo saraakiishii hore ee Ciidanka Soomaaliya.
Hadalka Sargaalkan hore uga tirsanaa Ciidankii xooga Dalka Soomaaliya ayaa imaanaya xiIi amaanka Magaalada Muqdisho uusan wali cago adag ku fadhin ayna mararka qaar ka dhacaan falal amaanka iyo xasiloonida lidi ku ah .
Daawo sawirada:Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Kormeer Ku Sameeyay Waddo Dib u Dayactir Lagu Sameynayo.
Wasiirka arrimha gudaha iyo ammaanka qaranka ee Xukuumadda Soomaaliya oo maanta kormeeray mashruuca dowladda Turkiga ay kawaddo magaalada Muqdisho ee ku saabsan dacyactirka wadooyinka muhiimka ah ayaa dowladda Turkiga mahadcelin howlaha dib loogu dayactirayo wadooyinka gobolka Banaadir, islamarkaana lagu soo celinayo bilicdii ay lahayd gobolka Banaadir.
C/kariin Xuseen Guuleed oo kormeerkiisa ay ku wehliyeen xubno ka tirsan labada gole ee dowlada ayaa shaac ka qaaday in dib u dayactirkaan uu wax weyn ku soo kordhin doono guud ahaan magaalada Muqdisho.
Gaadiid casri ah oo noocyi kaladuwan leh ayaa loo adeegsanaya howlaha dayactirka ah ee ka socda wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho ayadoo ay siwada jir ah uaga wada shaqeynayaan shaqaale isugu jira Soomaali iyo kuwo dalka Turkiga ka soo jeeda .
Arrimahan dib u dayactirka ayaa qeyb ka ah qorshe lagu mataanaynayo magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul ee dalka Turkiga, kaasi oo ay iska kaashanayaan maamulada labada dowladood, islamarkaana bulshada Soomaaliyeed u horseedi karto horumar.
Afhayeenka maamulka gobolka banaadir Maxamed Yuusuf Cismaan oo Warbaahinta Qaranka la hadlay ayaa sheegay in howlahan dib u dayactirka wadada isku xirta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde iyo Maka Al mukarama lagu hagaajin doono muddo 15-cisho ah, isagoo intaa ku daray in sidoo kale jidka lagu xiri doono nalal.
Mid kamid ah mas,uuliyiinta Turkiga oo ku howlan mashruucani dayactirka ah ayaa sheegey in ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay u garab istaagi lahaayeen shacabka Soomaaliyeed, ayna sii wadayaan howlaha wax loogu qabanayo bulshada Soomaaliyeed.
Xildhibaanada Baarlamanaka oo maanta iyaga oo isfiirinaya ku kala dareeray Fadhigii ay lahaayeen kadib markii..
Waxaa Maanta baaqday fadhigii Baarlamaanka Soomaaliya ku yeelan lahaayeen Xaruntooda Magaalada Muqdisho kadib markii uu buuxsami waayay kooramkii loogu tala galay in fadhiga Baarlamaanka uu ku furmo.
Kooramka Baarlamanaka fadhigooda ku furmi karay ayaa ahaa 139-xildhibaan hasa ahaatee waxaa kulanka soo xaadiray ilaa 133-Xildibaan iyadoona mudo saacad ah uu ku daray Gudoonka Baarlamaanka uu ku buuxsami waayay Kooramka ugu dambeyna lagu kala dareeray kulanka iyadoo la is fiir fiirinayo.
Fadhiga maanta ay yeelan lahaayeen Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa kulankii Sadaxaad ee kalfadhiga 3aad ee Baarlamaanka , kulankan ayaana Maanta qorshaha ahaa in warbixino looga dhageesto Xildhibaano safaro dibada ah ku aaday xiligii fasaxa ahaa.
Gudoonka Baarlamaanka ayaana Xildhibaanada xaadirtay Xarunta Golaha Shacabka ku amray in ay kala tagaan kol hadii kooramkii buuxsami waayay , waxa ayna arintaan muujineysaa sida Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood aysan wali ugu diyaarsaneyn howlaha adag ee Qaran Soomaaliyeed u hayaan.
ma ahan markii ugu horeesay oo kulamo Muhiim ah ay yeelan lahaayeen Baarlamaanka Soomaaliya uu u baaqdo kooram la'aan, waxaana xusid mudan in Xildhibaano badan oo katirsan Baarlamaanka ay magac yaal un yihiin balse aan kasoo qeyb galin kulamada ay yeeshaan Baarlamaanka Soomaaliya.
Hogaamiyaha Al-Qaacida Dr Ayman Al-Zawahiri oo baaq cajiib ah u diray Muslimiinta kunool Daafaha Dunida.
Hogaamiyaha Ururweynaha Al-Qaacida Dr Ayman Al-Zawahiri oo Fariin cajal ah soo diray ayaa ugu baaqay Muslimiinta kunool Dunida in ay mucaaradaan Dowlada Mareykanka ayna joojiyaan isticmaalka Lacagta Dollarka.
Dr Ayman Al-Zawaahiri waxa sidoo kale ugu baaqay kooxaha taageersan Ururka uu Hogaamiyo ee Al-Qaacida in weeraro ka geestaan Gudaha Dalka Mareykanka haba yaraadaan weeraradaasi.
Waxa uu intaa ku daray Hogaamiyaha Al-Qaacida in weeraro laga geesto gudaha Dalka Mareykanka iyo sidoo kale diidmo la diido lacagta Mareykanka taa uu xusay in uu bur bur ku keeni karto dhaqaalaha Mareykanka uu sheegay in uu hada yahay mid hoos u dhac iyo bur bur kusocdo.
lama oga sida ay u qaadan karaan Baaqan cusub uu Hogaamiyaha Al-Qaacida Dr Ayman Al-Zawahiri usoo jeediyay Umada Islaamka ee ah in ay diidaan Isticmaalka lacagta Dollarka si uu bur bur dhaqaale ugu yimaado Dowlada Mareykanka.
War Deg Deg Ah Dowlada oo goordhaw Xabsiga dhigtay mid kamid ah Culumaa'udiinka Soomaaliyeed ee Caanka ah.
Xarunta Dambi baarista CID-da ee Magaalada Muqdisho ayaa goordhaw waxaa lagu xiray Sheekh Cabdi Qaadir Maxamed Soomow oo kamid ah Culumaa'udiinka Soomaaliyeed ee caanka ah ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho.
Sheekh Soomow ayaa kamid ahaa Saraakiisha sar sare ee Culumada Ahlu Sunna Waljameeca waxaana saakay looga yeeray Xarunta Dambi Baarista si su'aalo loo weydiiyo iyadoona Su'aalo weydiin kadib Sheeqa loo sheegay in uu maxbuus yahay.
Sheekh C/Qaadir Soomow oo Warbaahinta la hadlay kahor inta aan Telfoonkiisa laga damin ayaa sheegay in lagu xiray Xarunta CID-da sababta loo xirayna loogu sheegay in ay tahay amar kasoo baxay Madaxweynaha Soomaaliya sida uu xusay Sheekh Soomow.
lama oga wali dambiga loo heesto Sheekh Soomow oo kamid ah culumada ku dhaqan Magaalada Muqdisho waxa uuna kamid ahaa Culumadii dhawaan Muqdisho ku kulmay kana soo saaray fadwadii ka dhanka aheed Al-Shabaab.
Shirkad Laga Leeyahay Turkiga Oo Maanta La Wareegeysa Maamulka Garoonka Aadan Cadde.
Waxaa maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo howlaha ay shirkada Favori kula wareegeyso maamulka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Saacado kadib ayaa lagu wadaa in la soo gebagebeeyo qorshe ay shirkad Turki ah kula wareegeyso maamulka garoonka diyaaraha Aadan Cadde oo Sadexdii sano ee la soo dhaafay ay maamuliysay shirkada SKA.
Go’aanka isbedelka ee maamulka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxa uu ka soo baxay gola wasiirada ee xukuumada Federaalka Soomaaliya si loo horumariyo adeegyada garoonka diyaaradaha.
Wasiirka warfaafinta Boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka mudane Ciilmooge Xirsi ayaa warbaahinta u sheegay in Sadexdii galabnimo ee shalay ay si rasmi ah u bilaabatay in shirkada cusub ay la wareegto maamulka garoonka, isagoo intaa ku daray in isbedelkaasi uusan wax saameyn ah ku yeelandoonin howlaha garoonka.
Shirkada favori oo ah shirkada la wareegtay maamulka garoomaka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa la filayaa in wax weyn ay kusoo kordhiso adeegyada garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde.
Daawo Sawirada David Cameron Oo Carruurtiisa Sida dadka Caadiga Ah Maalin Walba Dugsiga U Geeya Isagoon Ilaalo La Socon.
Dhacdooyinka naxtinta iyo layaabka leh oo maalmahan kusoo badanaya Qeybo badan oo kamid ah Gudaha Soomaaliya.
Waxaa dhawaan Deegaanka Godob Jiiraan ee Gobolka Nugaal ka dhacday dhacdo xanuun badan dad badana la yaabeen kadib markii Wiil dhalinyaro ah uu halkaasi ku dilay gabar uu Jeclaa kadibna isagii is dilay.
Wiilkan oo magaciisa lagu sheegay Mahad Maxamuud Xirsi ayaa labo xabadood waxa uu ku dhuftay gabar adeerkiis dhalay oo jacel kala dhaxeeyay markii uu hubsaday in dhaawaca uu u geestay gacalisadiisa uu yahay mid halis ah ayuu isna isla goobtaasi isku toogtay halkaasina ku dhintay.
Gudoomiyaha Deegaanka uu falkan ka dhacay C/casiis Cusmaan Cabdi (Ilko Bal-balo) ayaa sheegay in gabadha oo dhaawac culus soo gaaray ay geeriyootay xili loo qaaday Isbitaal kuyaala Magaalada Garawe si halkaasi loogu daweeyo balse inta aan la gaarsiin dhax ku geeriyootay.
Gudoomiyaha ayaa xusay in falkan foosha xun ee ka dhacay Deegaanka Dodob Jiiraan ay sababteeda tahay arimo jaceyl uu sheegay in uu ka dhaxeeyay Wiilka is dilay gacalisadiisana dilay , waxa uuna intaa ku daray in Wiilka iyo gabadha ay ahaayeen ilmo adeero.
Sababaha wiilkan ku kalifay in uu ku dhaqaaqo falkan foosha xun ayaa loo aaneeyay in culees jaceylkiisa ku aadan uu kala kulmayay dhinacyo kala duwan , taa oo keentay igu dambeyn in uu dilo gabadhii uu jeclaa isna is dilo.
Falalkan Foosha xun oo ah dhaqan aysan Soomaali laheyn ayaa laga soo minguuriyay aflaanta Shisheeye ee la daawado gaar ahana kuwa Hindiga , iyadoona dhacdooyinka nuucyadan ah iyo kuwa kasii daran mudooyinkii dambe ahaayeen kuwa kusoo kordhaya gudaha Soomaaliya.
Shirkada Reer Japan ee Toshiba oo soo saartay Cumputero casri ah oo aad loo jecleestay (Daawo Sawirada)
Shirkada laga leeyahay Dalka Japan ee Toshiba ayaa soo saartay Cumputero casri ah oo aad looga soo dhaweeyay dunida kuwaa oo la shaqeyn kara adeegyada Casriga ah ee soo saaraan Shirkadaha Caalamiga.
Cumputaradan Cusub ee soo saartay Shirkada Toshiba ayaa ah sadax nuuc oo nashqado casri ah ku sameesan kuwaa oo gudahooda laga helayo adeegyada casriga ah ee mudooyinkii dambe dunida kusoo kordhay.
Toshiba Cumputeradan casriga ah ee soo saartay labo kamid ah waxa ay ku shaqeyn karaan Android 8 halka kan kalana uu ku shaqeyn karo Android 8.1 sida laga soo xigtay masuuliyiin Shirkadan u qaabilsan dhinaca suuq geynta.
Cumputeradan cusub maahan kuwa qiimahooda aad u sareeyo waxa ayna u dhaxeeyaan $300 ilaa $600, waxa ayna u kala qaalisan yihiin sida ay u kala tayo sareeyaan.
Wasiirka Warfaafinta Oo la kulmay mas’uuliyiinta Shirkadda Garoonka La Wareegeysa.
Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay mas’uuliyiinta shirkadda cusub ee la wareegeyso garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cade iyo shirkadii horey gacanta ugu haysay garoonka SKA, iyadoo shirkadda cusub ee maalinta beri la wareegayso maamulka garoonka laga leeyahay dalka Turkiga.
Kulankaan uu Mudane Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi la yeeshay masuuliyiinta shirkadahaasi SKA iyo shirkada “Favori” ayaa ahaa mid looga hadlayay howlaha garoonka ka socda iyo sida ay ula wareegeyso shirkadda cusub ee laga leeyahay dalka Turkiga.
Markii uu soo dhamaadey shirka kadib ayaa Wasiirka Warfafinta Mudane Cabdulahi Ciilmoge Xirsi la hadley warbahinta ayaa tilmaamay in kulankaani uu daba socdey kulamo hore oo looga tashanayey sidii howlaha garoonka looga wareejin laha shirkada SKA, islamarkaana lagu wareejiyo shirkada “Favori” oo shaqada si rasmi ah ula wareegi doonto maalinta berito ah oo ku beegan 15-ka September.
“Shaqada garoonka waxba iskama badalayaan horey ayaan ula kulanay mas’uuliyiinta labada dhinac, u jeedada kulankaanna waxa uu yahay sidii Shirkadan cusub loogu wareejin lahaa garoonka, taasi oo ka dambeysay ansixintii golaha Wasiirada” ayuu hadalkiisa ku daray Wasiirka.
Sidoo kale Wasiirka Warfafinta, Boostada iyo Gaadiidka Mudane Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi ayaa xusay in ay jireen shirar kala duwan oo ay la qaateen maamullada labada Shirkadooda kuwaasi oo uu xusay in loogu gogol xaarayay sidii howlaha garoonka loogu wareejin lahaa shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga.
“Shirkaddan cusub ee Favori waxa ay howlaha garoonka si rasmi ah u bilaabayaan 3:00 galabnimo, anaguna waxaan u joognaa sidii loo hirgelin lahaa heshiiskaasi ku saabsan in Shirkadii hore ee garoonka maamuli jirtay ee SKA xilka wareejiso, kuna wareejiso shirkadda Favori oo aan rajeyneyno in ay howlaha garoonka wax badan ku soo kordhin doonto” ayuu Ciilmooge hadalkiisa ku soo koobay.
Shirkadan cusub ee la wareegeysa howlaha garoonka ayaa laga filayaa inay wax badan ku soo kordhiso habka uu u shaqeeyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Safaarada Soomaaliya ee Turkiga oo ku guul Dareesatay in ay sii dayso Fanaanada Qamar Cabdilahi oo ku xiran Istanbul, Fanaaniinta waabari oo eedeeyay Safaarada..
Safaarada Soomaliya ee Turkiga ayaa Xiligan u muuqata in ay ku Guulo dareesatay in ay sii dayso Fanaanada Qaranka Soomaaliyeed Qamar Cabdilahi oo in ka badan 6 bil ku Xiran Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Safaarada ayaan wax Culays ah iska saarin in la sii daayo fanaanada oo la sheegay arimo xaga socdaalka ah in ay kuy xiran tahay bilihii la soo dhaafay.
Fanaaniin la soo Xiriiray Bogan ayaa ku eedeeyay Safiirka Soomaliya ee Turkiga Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxman, in uusan Taleefanka ka qaban ayaga oo raba in ay kala hadlaan arimo ku aadan fanaanada si Xoriyadeeda u hesho.
Fanaan ka mid ah fanaaniinta Hobolada Qaranka Soomaaliyeed ee Waabari ayaa sheegay in safiirka uu ula dhaqmay si Quursi ah, waxayna sheegeen in uu u soo Jawaabi waayay ku dhawaad bil oo ay war ka sugayeen.
Safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaa xiligan u muuqda in uu guul Dareestay kadib markii fanaanada Qaranka uu wax uga qaban waayay arimo xaga socdaalka ah, taasi oo Xiligan u Muuqata Fashil ku aadan safarada Soomaliya ee Turkiga oo loo baahan yahay in Xukuumada Saacid ay is badal ku samayso arintaas.
Sidoo kale safiirka Soomaliya ee Turkiga ayaa lagu wadaa in la badalo kadib markii Bilo ka hor uu ku fashilmay in uu iska dhiibo Dalka Holand asaga iyo Qoyskiisa oo la soo Celiyay, taasi oo Waji gabax ku Noqotay Wasaarada arimaha Dibada Soomaaliya.
Qoraal ay si wadajir ah u soo wada saareen Madaxweyne Xasan Sheikh iyo Catherine Ashton ee Heshiiska Cusub ee Somalia
Cidna ma dafiri karto in Soomaaliya meel fog ka timid. Isbedelladi waaweynaa ee dalku soo maray bilihi dhawaa waxay muujinayaan awooda balan-gal ee ah in dalka laga saaro dagaalada sokeeye iyo saboolnimada, balan-gal ay hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ku doonayaa in ay uga jawaabaan hiigsiga dadkooda ee mustabal wanaagsan iyadoo Midowga Yurub iyo shurakada caalamiga ahna ku taagyeerayaan tubtooda dib-u-dhiska iyo xasilinta.
Olola ciidan ee ay horsedka ka yihiin AMISOM, Ergada Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay ka saareen Al-shabaab qaybo badan oo ka mid ah dalka. Weerarada burcad-badeedka waxay hoos ugu dhaceen 93% labadi sanoo la soo dhaafay, mana aysan jrin 2013 hal dhacdo ay ku guuleysateen. Weerarada argagixisa ayaa welitood dhulka ka dhacaya iyadoo halista ku aadan nafta, nabadgelyada iyo xasiloonida ay tahay mid dhab ah. Laakin Soomaalidu dibada way ka soo noqonayaan waxayna gacan ka geysanayaa maalgashiga iyo dhisidda dowladda cusub. Midowga Yurub iyo kuwa kaleba waa in ay ku taagyeeraan howshan dib-u-dhiska si ay Haya'daha cusub ee Federalka ay u sameeyaan dowlada federal ah oo shaqayneysa qabtaan doorashooyin sida la qorsheeyey 2016.
Si loo astaameeyo horumarka la gaaray loona taagyeero dadaalka dib-u-dhiska waxaannu ku martigelinaynaa shir Brussels 16/9/2013 si loogu daah-furo "Heshiiska cusub ee Soomaaliya". Dhacdadan waxay ansixin doontaa heshiis balan-gal ka dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka si loogu socdo si dhaqsi leh tubta nabadda iyo barwaaqada- taasoo ku sar-go'an hanaanka "Heshiiska Cusub" ee lagu taagyeero dalalka nugul iyo kuwa ku sugan xaaladaha colaadaha ka dib.
Iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo reer yurub wuxuu gacan ka geystay sal u dhigidda horumarkan. Waqtiyadi dhibka badanaa ee ay Soomaaliya soo martay 20ki sannoo la soo dhaafay Midowga yurub marna ma hakin kaalmo. Marki macluushu ku habsatay dalka gar-gaarka bani'adannimo ee reer yurub waa la jira. Marki argagixisanimadu ku halis gelisay qas, Midowga Yurub iyo shurakadiisa waxay taagyeereen ololaha AMISOM in ay dib uga saarto waxayna keentay Ergada Midowga Yurub ee Tababaridda oo ka taagyeereysa Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed in ay soo ceshadaan wax galnimadooda. Marki burca-badeeddu halis gelisay marinada badda ee badweynta Hindiya, Ciidamada Badda Midowga Yurub waxay hakameeyeen burcaddi iyadoo Ergada EUCAP NESTOR loo abuuray in ay xoojiso nabadgelyada badda. Mar walboo ay suurta gal tahay fursad shaqo horumarineed ee waqtiga fog, Sanduuqa horumarinta ee Midowga Yurub waa maalgeliyaa.
Weli, lama joogo meel lagu qanco. Waxaannu u baahannahay in aan sii wadno dadaalka is-bedelka. Halganka looga soo horjeedo Al-shabaab waa in la dhammaystiraa. Hiigsiga siyaasdeed waa in loo rogaa xaqiiga sugan. Dalku wuxuu u baahan yahay hay'ado shaqeeya oo ay dadku aaminsan yihiin. Ku-xukantanka sharciga, nabadgelyada iyo maamul maaliyadeed oo hufan waa in la dhisaa. Wadamada deriska la ah dalka waa in ay helaan dammaanad in Somaaliya ay ahaan doonto xoog gacan ka qayb qaata xasiloonida gobolka ee aysan qayb ka noqon xasilooni darada.
Laakin waa in aan wax qabanaa hadda waana in aan wax ku qabanaa wadajir. Guushu waxay ku jirtaa iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka- iskaashi dhab ah oo ay Soomaalidu ku qaadeyso xuquuda iyo waajibaadka dowlad madax-banaan, kuna hananayaan lahaanshaha iyo masuuliyadda mustaqbalkooda. "Shirka Heshiiska Cusub ee Soomaaliya" wuxuu siinayaa fursadan lagu hananaayo barnaamijka lagu siin lahaa Soomaaliya taagyeerada ay baahan tahay laguna siin lahaa Soomaaliyada mustaqbalka ay mudan yihii.
Dagaal ka dhacay Gudaha Magaalada Kismaayo iyo Faah Faahino laga helayo cida uu u dhaxeeyay.
Wararka aan saaka ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xalay gudaha Magaaladaasi uu ka dhacay dagaal socday daqiiqado kooban oo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan.
Dagaalka ayaa la tilmaamay in ay qaadeen Rag katirsan Al-Shabaab kuwaa oo weeraray fariisimo ay lahaayeen Ciidamada Maamulka Jubba uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam.
Lama oga Qasaaraha labada dhinac kala gaaray waxaana lasoo tabinayaa in ay jiraan qasaarooyin kala duwan oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo waliba dadka shacabka ah inkastoo aan si rasmi ah loo heyn tirada waxyeelada.
Hogaamiyaha Maamulka Jubba Shdeekh Axmed Madoobe oo isagu ku eedeeyay qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Magaalada Kismaayo kooxda Shabaab ayaa ku hanjabay in kooxdaasi la dagaalami doonaan si ay uga hortagaan dhibaatada ay shacabka gaarsiiyaan.
Magaalada Kosmaayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay qaraxyo iyo Weeraro toos ah kuwaa oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyaan Kooxda Al-Sahbaab oo xoog looga saaray Magaaladaasi.
Daawo Sawirada Shirkadda Apple oo soo bandhigtay Iphone leh Softwareka ku xirashada mobileka sawirka farta (Finger print).
In badan oo la sugayay kadib, Shirkadda Apple ayaa daaha ka rogtay naqshadda cusub ee teleefoonadeeda ku caan baxay magaca iphoneka, Apple ayaa soo bandhigtay iphone5S xambaarsan barnaamijyo ay dad badan filanayn.
Shirkadan ayaa soo bandhigtay muuqaalada iphone5S iyo iphone5C oo leh barnaamijyo hor leh. Iphone5S ayaa wata barnaamij casri ah oo aan weli shirkadaha teleefanada caalamka aysan soo saarin, Apple ayaa ku guuleysatay in iphone5S uu xambaarsanaado barnaamij u saamaxayo milkiilaha mobilka inuu ku qufusho mobilka iphone5S sawirka suulkiisa, taasoo uu isaga oo kaliya awood u yeelanayo inuu furo maadaama uu suulkiisa ku qufulay.
Barnaamijka ku qufulashada sawirka suulka ayaa waxaa hore loogu isticmaali jiray meelo kale sida saxiixa sharciyada dadka (Baasaboorada) ama saxiixa dadka aanan wax qorin.
Shirkadda Apple ayaa daaha ka rogtay naqshada cusub ee iphone5S oo durba caalamka laga wada arkay warbaahinta.
Waxyaabaha ku cusub iphone5S ayaa waxaa ka mid ah in aad isticmaali karto muddo 10 saacadood adigoo ku guda jira isticmaalka internetka, waxaa kaluu leeyahay barnaamijka uu ku shaqeeyo ee IOS7 oo casri ah kaasoo kuu saamaxaya in sawiro goosgoos ah ka daawato baraha bulshadu ku kulmaan sida twitterka.
Iphone5S waxa uu kusoo baxay shan midab oo kala ah: cadaan, cagaar, jaalle(huruud), buluug iyo guduud(casaan).
R.Wasaare Saacid “Qaraxyadan maahan kuwo ka hor istaagaya dib-u-heshiinta iyo nabad ku soo dabaalida Jubooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa si weyn u cambaaraysay qaxayadii axmaqnimada ahaa ee lala beegsaday kolonyo uu saarnaa Hogaamiyaha Maamulka Juba mudane Sheekh Axmed Islaam ( Axmed Madoobe)
“Waxaan si aad ah u cambaaraynayaa qaraxyadii waxashnimada ahaa ee lala eegtay koloyo uu saarnaa Hogaamiyaha Maamulka Juba, waa weerar loogu tala galay in lagu gumaado dad aan waxba galabsan, lana doonayey in lagu khal-khal galiyo amaanka iyo xasiloonida gobolka,”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid.
“Qaraxyada noocaan ah maahan kuwo ka hor istaagaya dib-u-heshiinta iyo nabad ku soo dabaalida gobolada Jubooyinka, waana qaraxyo aan laga gaarin u jeedkii la lahaa, anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan xukuumadda waxaan halkaan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii dadkii ku wax yeeloobay qaraxaas, waxaana ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad taam ah siiyo dadkii ku dhaawacmaya”
Qaraxan ayaa waxa sheegatay ururka Alshabab, wuxuuna qayb ka ahaa dagaalka ay kula jiraan shacabka Soomaaliyeed, dowladuna waxay dadaal u galaysaa sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha nabad diidka ah.Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa si weyn u cambaaraysay qaxayadii axmaqnimada ahaa ee lala beegsaday kolonyo uu saarnaa Hogaamiyaha Maamulka Juba mudane Sheekh Axmed Islaam ( Axmed Madoobe)